Mpanjifa ambongadiny manana kalitao 80 manisa paompy fanadiovana fanoherana ny famonoana bakteria mpamatsy sy mpanamboatra | tsara kokoa
Model Model: QMSJ-335
Akora ilaina: Alikaola 75%, Nov-tenona, Ro-rano
Habe: 13 * 17cm
Sasa isaky ny kapoaka: Isa 100
Ny famafana famonoana alikaola azo araraotina dia manahirana ny fampiasana azy rehefa tsy mora diovina amin'ny rano rehefa mivoaka, ary azo ampiasaina. Ny singa misy ranoka amin'ny solo-drano lena matetika dia rano manadio na voadio, famonoana otrikaretina ary hanitra, izay azo ampiasaina hanadiovana ny hoditra. Ny famafana famonoana alikaola dia mety mitana andraikitra sasany amin'ny fanamorana sy famonoana otrikaretina rehefa manadio ny hoditra. Izy io koa dia afaka manadio sy manakana ny bakteria mandritra ny fanadiovana, izay misy vokany fanadiovana tsara kokoa ary mety entina. Ny hamafana amin'ny ankavanana dia fanosehana alikaola izay misy alikaola 75% ary afaka manadio tsara.
Nahazo an'ity hamafa alikaola ity ihany izahay tamin'ny farany taorian'ny R&D sy fitsapana maro. Ny fifantohana alikaola avo kokoa dia tena hitondra ny anjara asan'ny sterilization. Ary io famafana toaka io dia misy alikaola avo lenta.
Ny endrika tsotra sy tsara tarehy dia mahatonga azy io ho malaza kokoa. Ny fonony voaisy tombo-kase dia afaka mifehy tsara ny fanodinkodinan'ny alikaola.
Taloha dia mety tsy ho mora rovitra ny namaoka lena rehefa mampiasa azy ianao. Nihatsara io famafana lena io tamin'ity lafiny ity. Nohatsarainay ny hakitroky ny fanapahana an'ilay milina, mba hahafahanao mamono mora foana ny mamafa.
Ary ity hamafana ity dia matevina kokoa noho ny ankamaroan'ny mamafa amin'ny tsena. Ny lamba malefaka tsy tenona dia tena tia hoditra.
75% mamafa zava-pisotro misy alikaola. Famonoana otrikaretina mahomby. Afaka mamono bakteria 99,9%. Aorian'ny fitsapana dermatolojia dia tsy mampaninona ny hoditra izany ary azo ampiasaina matetika. Aza mihinana, mitelina. Tsy mahasolo ny fanafody.
Manana traikefa an-taonany maro izahay amin'ny famokarana sy ny varotra indostrian'ny soloina lena.
Manana tahiry angon-drakitra goavambe izahay, ny alàlan'ny fanatsarana sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao henjana.
Manana karazana safo-drano lena be dia be isika, toy ny famafana famonoana otrikaretina tsy ara-dalàna, famafana fanesorana makiazy, solo-jaza, famafazana biby fiompy, famafana fiara, famafana an-dakozia, famafana ny vatana, famafana maina, sns.
Afaka manome anao serivisy namboarina izahay. Izahay dia ho OEM sy ODM idealy anao. Ny vokatra totalinay dia mihoatra ny 80000.000.
Manana fahazoan-dàlana manafatra sy manondrana izahay. Antoky ny zarana hanondranana ny vokatra. Ny vokatray dia nandalo CE, FDA, MSDS ary fisoratana anarana fanamarinana hafa. Raha manana fepetra takiana fanamarinana hafa ianao, dia tena vonona ny hifampiraharaha aminao izahay hamita.
Fonosana misokatra. Sintaho hamafa. Kitapo fonosana hitazonana ny hamandoana
mando tanana tsara amin'ny vokatra
Avela ho maina tsy hosasana
magazay eo anelanelan'ny 15-30C (59-86F)
Sorohy ny hafanana mangatsiaka sy hafanana tafakatra 40C (104F)
Teo aloha: 75% gel famonoana zava-mahadomelina azo alain-tahaka an'ny alikaola
Manaraka: ODM Mpanamboatra China Mamono otrikaretina karazana bakteria fanadiovana karazana bakteria
famafana fanadiovana miorina amin'ny alikaola
famaohana tanana mifototra amin'ny alikaola
mamafa tanana ny toaka
soloina mando toaka
mamafa otrikaina antiseptika
mamafa menaka toaka
mamafa zava-pisotro misy alikaola
Mampihena ny bakteria 75% Alikaola ...
Factory OEM 80 mamafa ny kitapo fanadiovana multiflose ...
Doka 160 azo soloina isaky ny canister 75% a ...
Factory OEM manana fahaizana lehibe 750 manisa multipurp ...